Wakiillada xiddiga Manchester United Jesse Lingard, oo 28 jir ah, ayaa wadahadalo hordhac ah la leh kooxda Faransiiska ee Nice oo ku saabsan heshiis amaah ah inta ka harsan xilli ciyaareedkaan, laakiin heshiiska ayaa rasmi noqon doona xagaaga soo socda. (Sky Sports)
Tababaraha Wolves Nuno Espirito Santo ayaa sheegay in wakiilka oo raadinayay koox cusub oo Premier League ah oo uu ku jiro tababaraha reer Portugal bishii Sebtember uu saxiixay qandaraas cusub oo uu kusii joogayo Molineux Stadium. (Cadceed)
Tottenham Hotspur ayaa joojisay qandaraaska Danny Rose bishii Janaayo, West Brom ayaana xiiseyneysa 30 jirkaan daafaca bidix ka ciyaara. (Talksport)
Mesut Ozil, oo 32 jir ah, ayaa u sheegay Arsenal haddii ay siiyaan 7 milyan oo ginni ka hor xagaaga soo aadan inuu ka tagayo kooxda bisha Janaayo. (Ciyaaraha fudud)
Arsenal ayaa lumisay 19 jirka reer England ee weerarka ka ciyaara Folarin Balogun oo u ciyaara Jarmalka RB Leipzig. (Kubadda Cagta)
Liverpool ayaa qorshaynaysa inay kiraysato daafaca Brighton Ben White, oo 23 jir ah (Liverpool Echo)
Daafaca Manchester City iyo xulka Spain Eric Garcia, oo 20 jir ah, ayaa heshiis shaqsi ah la gaaray Barcelona, ​​kaasoo xagaaga si xor ah ugu dhaqaaqi doona. (Hadaf)
Tababaraha Barcelona Ronald Koeman ayaa ku qanacsan in kooxdiisa ay la soo saxiixan doonto labo ciyaaryahan oo reer Holland ah. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Georginio Wijnaldum, 30, iyo weeraryahanka Lyon Memphis Depay, 26, ayaa sugaya Camp Nou. (Mundo Deportivo)
Tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday in kubadsameeye Harry Winks oo 24 jir ah amaah lagu siin doonin kooxda bisha Janaayo. (Kubadda Cagta London)
Daafaca Everton Jonjoe Kenny ayaa laga yaabaa inuu ka tago Toffees bishaan, 23 jirkaan waxaa doonaya Burnley. (Liverpool Echo)
AC Milan ayaa wadahadal la yeelatay wakiilka weeraryahankii hore ee Juventus Mario Mandzukic, 34, oo ku saabsan heshiis bilaash ah. (Kubadda Cagta Talyaaniga.
Celtic iyo Rangers ayaa labaduba doonaya weeraryahanka reer Nigeria Taiwo Awoniyi, oo 23 jir ah, kaasoo haatan amaah ugu jooga Union Berlin ee Jarmalka. (90 daqiiqo)
Jack Wilshere, oo 29 jir ah, oo koox la’aan ahaa tan iyo xagaagii, waxaa doonaya Bournemouth, oo macallinkeeda Jason Tindall uu qorsheynayo inuu u soo bandhigo heshiis waqti gaaban ah. (Boostada)